မိုက်ခရိုဝေဖ့်ရဲ့ ဆိုးကျိုးများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » မိုက်ခရိုဝေဖ့်ရဲ့ ဆိုးကျိုးများ
Posted by စနေ on Dec 15, 2010 in Food, Drink & Recipes, Health & Fitness | 24 comments
နောက်ထပ် စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုက အမျိုးအစားတူ အပင်ငယ်နှစ်ပင်ကို အိုးတစ်ခုစီမှာစိုက်ပျိုးထားပြီး ပထမအိုးကို Microwaved water လို့ စာတန်းကပ်ထားပြီး အခြားတစ်အိုးမှာ Purified water လို့ စာကပ်ပါတယ်.. ကပ်ထားတဲ့အတိုင်းပါဘဲ ပထမပန်းအိုးကိုတော့ မိုက်ခရိုဝေ့ မီးဖိုနဲ့ ကျိုချက်ထားတဲ့ ရေကို နေ့စဉ်လောင်းပေးပြီး ဒုတိယအိုးကိုတော့ ရိုးရိုး မီးဖိုနဲ့ ချက်ပြီး အအေးခံထားတဲ့ရေကို လောင်းပါတယ်.. ပုံမှာ ကြည့်ပါရှင်…
ဦးကြောင်ကြီးကို ဗေဒင်က အသက်၁၂၀ထိနေရမယ်လို့ ဟောထားတာ ဒီအတိုင်းဆို ၁၀၀ အလွန်ဆုံးပဲနဲ့ တူပါ့။ ဩော် အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ။
ဆိုးကျိုးသိပေမယ့်လဲ သုညအောက်အေးတဲ့ဒေသမှာနေရတော့လဲ မတတ်နိုင်ဘူး … အဲဒါနဲ့မှ နွှေးမစားရင် ရေခဲထမင်း ရေခဲဟင်း စားရမှာ
မြန်မာပြည်မှာနေရတာ တော်တော်ကံကောင်းတယ်နော် …
microwave နဲ.ချက်ပီးရင် vibration တွေကျန်နေသေးလို. ချက်ချင်းမစားပဲ 15 minute လောက်မှစားရတရ် … ဆိုတာလောက်ပဲသိထားတာ …
ဒီစာလေးကို ဖတ်မိပြီး မဝေရဲ့ မိုက်ခရိုဝေဖ့်နဲ့ ဟင်းအလွယ်ချက်နည်းတွေကို သတိရလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ…
အင်္ဂလိပ် ဘိန်းမုန့် (pizzahurt ) နဲ့အင်္ဂလိပ် ဘာမုန့် လဲတိဝူး (hambaker) စားတဲ့လူတွေတော့နာပြီ
ဒါကြောင့် အောင်ပုတို့ ကတော့ ကစွန်းဥ ဖုတ်ဘဲစားတယ်
ဒေါ်အာဖျံကွီးကိုလည်း ကျေးဂျူးပါ (microwave နဲ.ချက်ပီးရင် vibration တွေကျန်နေသေးလို. ချက်ချင်းမစားပဲ 15 minute လောက်မှစားရတရ် )
ခုမှသိတယ် စားလာတာ နိုင်ခြံဂါးရောက်ကတည်းက
စိတ်ထင်တော့ ဝေ့ဗ် လုပ်တဲ့အချိန်မှာထွက်တဲ့ အငွေ့ တွေက စက်ထဲမှာ အောင်းနေပြီး ဖြစ်လာတာလားတိဝူးနော်။
ပြောလို့သာ ပြောတာ အဲဒီ မီးဖိုကြီး အကြောင်း ပြောရရင်.. မနေ့က အမေက ပြောတယ် ရေခဲ သေတ္တာထဲမှာ ရှိတဲ့ ပုဇွန်ခြောက်ကြော ငါ့ကို နွေးပေးအုန်းတဲ့.. စကား တပြောပြောနဲ့ ၂မိနစ်လောက် ပေးရမှာ ၅မိနစ်ပေးမိလို့.. ပုဇွန်ခြောက်ကြော် မီးသွေးတုံးဖြစ်သွားတယ်။ အဆူခံထားရလို့ စိတ်နာနေတာ..
အမေကို ပြန်ပြောလိုက်မယ်.. ဒီမီးဖိုကြီး လွင့်ပစ်လိုက်တော့လို့..
ပုံမမြင်ရဘူးဗျ အိမ်မှာကထင်းနဲချက်တာဆိုတော့ မစိုးရိမ်ရဘူး
သိပ်တော့ မဖြစ်နိုင်လောက်ဘူးထင်ပါတယ်..။ အနောက်နိုင်ငံတွေရော..တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာပါ..မိုက်ကရိုဝေဗ့်အာဗင်နဲ့ချက်နေတာ… ၇ာစုနှစ်ဝက်ကျိုးနေပြီ..အဲဒီကလူအသက်တမ်းတွေက .. သာမန်တတိယနိုင်ငံ(မိုက်ခရိုဝေဗ့်မသုံးတဲ့နိုင်ငံ)တွေထက်ပိုရှည်ကြပါတယ်..။
မိုက်ခရိုဝေဗ်မှာ အန္တရယ်တကယ်ရှိတာက ..လက်ကိုင်ဖုန်းလို ဒစ်ဂျစ်တယ်တွေကို လေထုထဲကပို့ လွတ်တဲ့စံနစ်တွေမှာလို့သာ ထင်မိပါတယ်..။
ဒါတောင်လူကိုအန္တရယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့စည်းဘောင်သတ်မှတ်ထားပြီး ..အဲဒါကျော်မှဖြစ်တာပါ..။ဒါကြောင့် ဖုန်းထုတ်တဲ့ကုမ်ပဏီတွေအားလုံးက ..စံနစ်တကျအစစ်ဆေးခံပြီးမှ ..ထုတ်ကြရတာပါ..။ မြန်မာပြည်လို.. ဂရေးမားကက်ပစ္စည်းတွေ လက်ခံဝယ်..သုံးစွဲနေရင်တော့ တမျိုးပေါ့..။
ဟင်းချက်..အပူပေးတဲ့ အာဗန်ဆိုတာက… ဘာမှထူးထူးဆန်းဆန်းလုပ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး..။
လျှပ်စစ်ဓါတ်ကို ကြိမ်နှုန်းမြင့်ပေးလိုက်တော့ … အသားအထဲကရေ၊ဆီစတာတွေက(မော်လီကျုးတွေက) … ကြိမ်နှုန်းမြင့်လို့တုန်ခါ ပူလောင်လာတာပဲလို့ သာမန်နားလည်နိုင်ပါတယ်..။
တခုပါပဲ.. သတ္တုလို ..လျှပ်စစ်ဓါတ်ဖြတ်စီးဆင်းတာ လွယ်တဲ့ အရာတွေမထည့်မိဖို့ပါပဲ..။
အဲဒါဆို..ကြိမ်နှုန်းမြင့်လွန်းတာကြောင့် .. အပူထွက်တာအရမ်းများပြီး .. မီးတွေပါတွေပွင့်ကုန်မှာမို့ ပဲဖြစ်ပါတယ်..။
တိုးတက်တဲ့ ခေတ်ပစ္စည်းတွေကို ..စိတ်ချလက်ချ သုံးကြပါခင်ဗျား.။
ယူအက်စ်မှာ ..လူထုကျမ်းမာေ၇း..ထိခိုက်မဲ့အ၇ာအားလုံးကို.. စမ်းသပ်ခန်းတင်ပြီးစစ်ဆေးနေတဲ့ ..အဖွဲ့ အစည်းကြီးတွေအများကြီးရှိပါတယ်..။ ဒေါက်တာအဆင့်..။မာစတာအဆင့်တွေ..ထောင်သောင်းချီပြီး နေ့ တိုင်း အလုပ်လုပ်နေကြတာပါ..။ သူတို့က.. ကုန်ပစ္စည်းတခု..စားသောက်စရာတခုထွက်ပြီဆို..စံနစ်တကျစစ်ဆေးပါတယ်..။ အပြစ်ကင်းမှ စက်ရုံတင်.ထုတ်ခွင်ပြုတာပါ..။
ထုတ်ပြီးသားကိုလည်း .. အချိန်အခါမရွေးလှမ်းလှမ်းစစ်ပါတယ်..။
ပြောရရင်.. ထင်းနဲ့ချက်တာကမှ… လူအသိုင်းအ၀ိုင်းအတွက်.. တော်တော်ဒုက္ခများနိုင်ပါတယ်..။
ထင်းမီးသွေးကြောင့် သစ်ပင်ပြုန်းတီးကုန်လို့ ..ပါတ်ဝင်းကျင်ထိခိုက်တယ်..။ ရာသီဥတုထိခိုက်တယ်..။ နောက်တော့ ..နာဂစ်လို..ဂီရိလိုမုန်တိုင်းတွေ..နဲ့လူတွေအသက်ပါပြန်နှုတ်တော့တာပါပဲ..။
ကာဗွန်တွေတိုက်ရိုက်ထွက်သမို့ .. ချက်တဲ့အစားအသောက်လည်း စားမကောင်းပါဘူး..။ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေလည်းများပါတယ်.။
တော်ပါသေးရဲ့။ နို့မို့ဆို microwave နဲ့တောင် ချက်မစားရဲတော့ဘူး ဖြစ်နေတာ။ ခုမှဘဲ မြန်ကောင်းသက်သာကို ဆက်သုံးရတော့မယ်။ ကျေးဇူးပါ။
တို့ကတော့ လွယ်လွယ်ကူကူ Gas နဲ့ပဲ ချက်တယ်…. (ဟီဟီ ကိုယ်မှ ၀ယ်မသုံးနိုင်တာ)
ခေတ်ကြီးကိုက စိစစ်မှုတွေများလာ အမျိုးမျိုးသော တွေ့ရှိမှုတွေ တွေ့လာ…
အင်း….အသက်ကိုညဏ်စောင့်ဆိုသလိုပေါ့ ချင့်ချိန် သုံးသပ်ကြပေါ့နော…
ဆူး ရေ လွှင့်ပစ်မယ်ဆိုကြိုပြောနော်
အိမ်ခန်းလေးထဲ.. ရေခဲသေတ္တာ၊ တီဗီ၊ မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်တွေ ပုံနေဖူးတယ်..။
ကျွန်မနဲ့ ဆူးနဲ့က အိမ်နီးနားချင်းတွေ … အန်ကယ်ကြီးလာယူရတာ ပင်ပန်းပါတယ် … ကျွန်မပဲ သွားယူလိုက်တော့မယ် …
အပေးအယူကတော့ တည့်နေကြတယ်။ ဆူးတောင် မနေ့က အဆူခံထားရလို့.. သိပ်မပြောရဲလို့ မပြောရသေးဘူး။
ကင်ဆာဖြစ်နိုင်လို့ မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်ထဲကို ပလပ်စတစ်၊ ကော်ခွက်၊ မယ်လမင်းခွက်တွေ ထည့်မနွေးနဲ့၊ ဖန်ခွက်၊ ကြွေပန်းကန်တွေပဲ သုံးသင့်တယ်လို့ မှတ်ထားပါသည်။
မှန်ပါတယ်..။ ပလပ်စတစ်၊မီလာမင်းတွေမှာ ပါတဲ့ဓါတ်တမျီုးက ..အပူနဲ့တွေ့ရင် ..ဓါတ်တမျိုးထုတ်ပြီး .. အဲဒီဓါတ်က..အပူပေးနေတဲ့အသား..ဟင်းရွက်ထဲသွားစွဲပါတယ်တဲ့..။
ဒါကြောင့်.. ယူအက်စ်ကခွက်တွေ..ပလပ်စတစ်ဗူးတွေထုတ်ရင်.. မိုက်ကရိုဝေဗ့်သုံးနိုင်တဲ့ အမှတ်အသားလေးပါထည့်ပေးပါတယ်.။
အခုလိုသိထားရတော့ ဆင်ခြင်လို့ရတာပေါ့၊post တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ထင်းမီးသုံးတော့ သစ်တော ပြုန်းတီးတယ် .. ကာဘွန်ဓါတ်ငွေ့တွေကြောင့် ဖန်လုံအိမ် ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် .. မီးသွေးလဲ အလားတူ ပြောကြပြန်တယ် ..
ဟိုတုန်းကတော့ ရေနံဆီ မီးဖို သုံးခဲ့ကြသေးတယ် .. အခု ရေနံ မရှိတော့ ဒီဇယ်မီးဖို ဆိုတာ လုပ်လာပြန်တယ် .. သူ့ကိုသုံးတော့ .. ဒီဇယ် အနံ့က တော်တော် ဆိုးတယ် .. မှိုင်းအထွက်တော့ နည်းတယ် ..
ဂက်စ် သုံးမယ် ဆိုတော့ အစိုးရဈေးနဲ့ ရတဲ့လူတွေ အလုပ်ဖြစ်ပါတယ် .. ပိုလို့ ပြန်ရောင်းတာတောင် တစ်လကို သောင်းနဲ့ချီပြီး မြတ်သေးတယ် .. ဒါပေမယ့် လူနပ်ချမ်းသာပါ ..
လျှပ်စစ် မီးဖို သုံးမယ် ဆိုပြန်တော့ လျှပ်စစ်မီးက မရ .. နွေဆိုရင် ဖုံတောင် တက်လို့ ..
နောက်တစ်မျိုး .. သံလိုက်စွမ်းအင်သုံးမီးဖို တဲ့ .. လျှပ်စစ်ကို သံလိုက်စွမ်းအင်ဖြစ်အောင် လုပ်ပြီး သုံးတာ လို့ ဆိုတယ် .. သူလဲ လျှပ်စစ် မရရင် ဘာမှ လုပ်မရသလို .. ဒန်အိုးနဲ့လဲ ချက်လို့ မရ ..
မီးချောင်းသုံး ဆိုတာကတော့ လျှပ်စစ်မီးချောင်းကို သုံးတာ ဓါတ်တော့ မလိုက်နိုင်ဘူးပေါ့ .. အပျက် များတယ် .. လျှပ်စစ် မရရင် ချက်မရပြန်ဘူး ..
အင်တာနက်နဲ့ စလောင်းက ပြတဲ့အထဲမှာ အလင်းပြန် စလောင်းကို သုံးပြီး နေရောင်မီးဖိုတွေ လုပ်ခဲ့သေးတယ် တဲ့ .. နေပူထဲ ထွက်လုပ်ရမှာ ဆိုတော့ ရေနွေးတယ်တာလောက်ပဲ ဖြစ်နိုင်မှာ ..
အခု မိုက်ကရိုဝေ့ဖ် ဆိုတာကလဲ လျှပ်စစ်မီး လိုပြန်ရော ..
အလိုအလျှောက် ဘာမှ မလုပ်ပဲ သုံးလို့ရတာများ ရှိရင် ကောင်းမှာနော် ..
(ကလေးအတွေးမျိုးဆိုရင် ချက်ပြီးပြုတ်ပြီး အဆင်သင့် ရှိမယ့် ပဒေသာပင်များ ဘယ်တော့ ပေါ်မှာလဲ ဟင်)
စားပြီးရင်လည်း..စက္ကူလေးတွေ ပြန်ပေးစ၇ာမလိုပါဘူး..။ ပလပ်စတစ်ကဒ်တခုထုတ်.. ရှေ့ မှာတွေ့တဲ့ စက်ရဲ့ စလိုက်လုပ်တဲ့နေရာတချက်ကောက်ဆွဲလိုက်… ပြီးရောပဲ..။
လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၅၀၀ကနေ.. ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀အထိ.. သမိုင်းထဲကလူတွေ… အခုဖြစ်နေတာကို ..ဒိဗ်ဗစက္ကုနဲ့ကြိုမြင်မိရင်… .ပဒေသာပင်ကို.. လူတွေသွားဆွတ်ခူးစားနေတယ်ပြောမှာပေါ့..။
(ဒါတောင် အင်တာနက်ကနေ..ဆဲလ်ဖုန်းနဲ့ ထိုင်ရာမထ .. မှာနိုင်တာမပြောသေးဘူး..)
တခါ နိုင်ငံခြား သတင်းတခုမှာ ကြည့်မိဘူးတယ်။ ကပ္ပလီ နိုင်ငံတခု ဖြစ်မယ် ထင်တယ် လူမဲ အမျိုး သမီးကြီးတွေ.. ဟင်းချက်ချင်တိုင်း အဲဒီ နေရာ တခုသွားပြီး ချက်ကြတယ်။ ထိုနေရာက မီးတောင်မပေါက်ကွဲသေးတဲ့ နေရာလိုမျိုး.. တွင်းကလေး တခု အတွင်းက မီးအပူတွေ ထွက်နေတာ ချောရည်တွေ ရှိနေသလိုမျိုး.. တီဗွီလိုင်းမှာ မြင်မိတာ.. အန်တီ မိုးတို့ မိသားစု အဲဒီ သွားပါလား.. ဟင်းချက်ရင် အဲဒီ တွင်းပေါက်ကလေးပေါ် အိုးကလေးတင်ပြီး ချက်လိုက်ပေါ့.. ဘာလောင်စာမှ မလိုဘူး။ သဘာဝမီးဖိုလေးပေါ့။
အောင်မြတ်လေး .. Denti Peak ကြည့်ပြီးကတည်းက မီးတောင်ဆို ဝေါင်ဝေါင်ရှေး ပဲ .. အင်ဒိုမှာ ဖြစ်တာတွေကို စလောင်းက ပြတော့ ပို ကြောက်သေး .. (သူက တစ်ကယ်ကြီးကိုး)
ဆူးက အချွန်နဲ့ မတာ .. အန်တီကို မမြင်ချင်တော့ဘူးနဲ့ တူတယ် ..
အနိစ္စသဘောနဲ့ ကိစ္စချောအောင် လုပ်တာ မဟုတ်ပေမဲ့ လွယ်ကူ သက်သာ ဖြစ်အောင် သတင်းပေးတာပါ။ မကြိုက်တော့လည်း နောက်တနည်း စဉ်းစားပေးမယ်။ အကြံရရင် လာပေးမယ်နော်.. အန်တီ..
အန်တီကို မမြင်ချင် မရှိပါဘူး.. အန်တီရယ်.. အန်တီကိုမှ မမြင်ရတာ.. ဟီးဟီး.. နောက်တာနော်
ဆူးကတော့ ရန်ကုန်မှာနေရတာ တရားရလွယ်တယ်လို့ ကုသိုလ်ရတယ်လို့ တစ်ခါပြောဖူးတယ် … မီးလာရင် လာတယ်မှတ်တယ် .. မလာရင် မလာဖူးလို့မှတ်တယ် … အနိစ္စပေါ့ … လုပ်ချင်တာလုပ်လို့မရတော့လဲ ဒုက္ခ ဒုက္ခနဲ့ ဒုက္ခကို ကောင်းကောင်းနားလည်တယ်တဲ့ … ကိုယ့်သဘောအတိုင်း မဖြစ်ပဲ သူ့သဘောသူ ဆောင်နေတော့လဲ အနတ္တကို ဆင်ခြင်နိုင်တယ်တဲ့ …
ဗမာပြည်မှာ လူဖြစ်ရတာ ဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့် ကံကိုကောင်းတာ …